Statement | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) - အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲနဲ့မှလား..?..? ..?
တူမောင်ညို - ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် စစ်အုပ်စုကုို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားနုိုင်မှသာ
YaeBaw Phoe Than Chaung - Articles
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AHRDO) ၏ အစီရင်ခံစာ
နေ့စွဲ- ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြီးမားပြင်းထန်သည့် ပဋိပက္ခသည် သမိုင်းကြောင်းနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ရေးသားပြောဆိုမှုများအကြား ဖုံးကွယ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများသူငါ၏ အထင်အမြင်မှားခြင်း၊ နားလည်မှုလွဲခြင်းများကို ခံနေကြရသည်။ သတင်းလွဲမှား စွာပေးခဲ့ကြသော၊ လိမ်ညာလှည့်ဖျားကြိုးကိုင်မှုရှိသည့် သတင်းမီဒီယာများက ၎င်းပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ စာနာသနားမှုနှင့်အမြင်သဘောထားများကို ပုံဖော်ပေး ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ၎င်းမီဒီယာများသည် ပကတိအမှန်တရားတွင် တက်တက်စင် လွဲမှားနေသော ယူဆချက်များကိုသာ ပေးလာခဲ့ကြတော့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ မတရား၊ မမျှတစွာ သွားပုပ်လေလွင့်ပြောဆိုရေးသားခြင်း၊ ကြောက်စရာကောင်းသူများအဖြစ် ပုံဖော်ခြင်းတို့ ရှိလာခဲ့သည်။ အမှန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်များကိုယ်တိုင် အောင့်အည်းသည်းခံ၍ ခံစားလာခဲ့ရသောဒုက္ခများကို ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ အပေါ် ရခိုင်များကပင် ပြုလုပ်ခဲ့သယောင် အပြစ်ဖို့၊ စွပ်စွဲခံလာခဲ့ကြရသည်။
ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AHRDO)က မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာကြီးတစ်ခုကို စုစည်းရေးသားထားပါသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ခေါင်းစဉ်မှာ –
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှု
မည်သို့ဖြစ်နေပုံ၊ အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ရပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများ
ဤအစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ပဋိပက္ခနောက်ကွယ်မှ သမိုင်းကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများ၊ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးမျိုး (ဦးနု၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း နှင့် အခြားခေါင်းဆောင်များ)၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနှင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) တို့ ပါဝင်ခဲ့သော အခန်းကဏ္ဍများကို အသားပေးတင်ပြထားသည်။ ထိုမျှသာမက ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အာသံပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၌ အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလတို့တွင် ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်ဆဲဖြစ်သော အပြိုင်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများကိုလည်း တင်ပြထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပြဿနာရပ်များ၏ သမိုင်းထဲမှ ဇာစ်မြစ်နှင့် ကြီးထွားလာမှု၊ အတိတ်က အကြိမ်ပေါင်များစွာ ဖြစ်ပျက်ဖူးသကဲ့သို့ ၂၀၁၂ – ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့်အောက်တိုဘာလတို့တွင် အကြမ်းဖက်မှု မည်သို့ပေါက်ကွဲခဲ့ရသည်၊ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အခြေအနေတို့ကို လည်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့များ၊ ပြည်ပမှလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကပင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာသည့် ဒုက္ခသည်များ အဖြစ်ထားရှိရန် လိုအပ်လာမှုများကို “ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ လှေစီးထွက်ပြေးဒုက္ခသည်များ“ ဖြစ်လာစေရန် အကြောင်းတရား အဖြစ်သာ မြင်ကြသည်။ ထိုသို့ ထင်မြင်မှုကြောင့် ”ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို နိုင်ငံသားပေးသင့်သည်” ဟူသော ရိုးရှင်းသည့် အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ၎င်းတို့ ချမှတ်ခဲ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟုတ်နိုင်၊ မဟုတ်နိုင်ဟူသော မေးခွန်းပင်မထုတ်ကြတော့ဘဲ အောက်ပါအတိုင်း ယူဆလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ယူဆချက်များမှာ –
(၁) ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများသည် (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးများကဲ့သို့ပင်) ရခိုင်ပြည်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြသည်။
(၂) ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများသည် အာဃာတတရားကြောင့် အကြောင်းမဲ့ အသတ်ခံနေကြရသူများ ဖြစ်ကြသည်။
(၃) ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရေးမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာပင်မလို။ ၎င်းတို့ကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ပေးအပ်လိုက်လျှင် ပဋိပက္ခနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ လျော့ပါးသွားမည်။ – ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤအစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခကို တလွဲဖော်ထုတ်ထားကြောင်း၊ ယူဆချက်များမှာလည်း ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ရှုမြင်ကြည့်လျှင် တက်တက်စင်လွဲနေကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ တင်ပြထားပါသည်။ ဤပဋိပက္ခ၏ သားကောင်အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးများကို နာမည်ဖျက်၊ အပုပ်ချတတ်သော ကြိုးကိုင်မှု၊ လိမ်ညာမှုများပြွန်းတီးနေသည့် သတင်းမီဒီယာများစွာရှိသည်ဟူ၍လည်း ထောက်ပြထားပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးများသည် မိမိတို့၏ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သော ယဉ်ကျေးမှု ကြွယ်ဝသည့် ဇာတိမြေကို သိမ်းပိုက်၍ အခြားလူမျိုး၊ အခြားဘာသာများကို သည်းမခံသည့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော စစ်မှန်သည့် စစ်ဆင်ရေးကြီးတစ်ခုကို နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ ခံစားနေရသော တကယ့်အမှန်တရားများကို ပြညွှန်းသွားမည့် သတင်းအချက်အလက်များစွာကို သမိုင်း အမှန်တရားများမှသာမက ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသော ဒုက္ခသည်များ၏ ပြောပြချက်များ၊ အခြားဆက်စပ်နေသည့် ပဋိပက္ခများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများဖြင့်ပါ တင်ပြထားပါသည်။
ဤအခြေအနေကို နားလည်ရန် အလွန်အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်မှာ ရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံး၏ လွန်ခဲ့သောနှစ် (၁၅၀) အတွင်း သမိုင်းနှင့် အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှစတင်၍ သမိုင်းကြောင်းကို သိရှိထားရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်ပြည်သူများ၏ အမှန်တကယ်ခံစား နေရမှုများ၊ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို တင်ပြရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်လူမျိုး သက်ကြီးဝါကြီးများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လယ်သမားများ၊ သံဃာတော်များ၊ ဆရာများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ မိခင်များ၊ မုဆိုးမများ စသူတို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များအားလုံးတွင် ကြောက်စိတ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ သည်းမခံနိုင်မှုများ၊ အစွန်းရောက်မှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေမှုများမှာ ကြောက်ခမန်း လိလိ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။
သတင်းမီဒီယာများ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေနေတွင် တက်ကြွသူ၊ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ကြသူများအားလုံးလည်း (ဤအစီရင်ခံစာ ကို) ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှု၊ ဆန်းစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်၍ ပကတိအမှန်တရားသည် အများသူငါရေးသားပြောဆို တင်ပြခဲ့ကြသည့်အခြေအနေနှင့် လုံးဝကွာခြားနေနိုင်ကြောင်း လက်ခံသွားကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဖတ်ရှုဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါဟုလည်း ပန်ကြားလိုပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာကို ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AHRDO) ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ အောင်မင်းဦးနှင့် အစီရင်ခံစာကို အဓိကရေးသားသူ ရစ်ခ့ဟစ်ဇ့မန် (Rick Heizman) တို့၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် သုတေသနပြုရေးသားတင်ပြထားပါသည်။
အောင်မင်းဦး- INFO@arakanhrdo.org Or AMO@arakanhrdo.org
Rick Heizman- rickmusic4@gmail.com Or earthviewmusic@yahoo.com
Conflict and Violence in Rakhine State, Myanmar
The violent conflict in Arakan is shrouded by history, and historic claims, and is misidentified and therefore misunderstood by many. And, withamassive amount of misinformed, and even fraudulent and manipulative media shaping the sympathy and perception of the conflict, assumptions have been made which are – in objective reality – quite erroneous. The Rakhine Buddhist people have been unfairly and unjustly vilified and demonized, and blamed and accused of that which they themselves have endured and suffered from.
Arakan Human Rights and Development Organization (AHRDO) has compiledalarge and comprehensive report about the conflict and violence in Arakan (a.k.a. Rakhine State), in the western part of Burma (a.k.a. Myanmar), titled:
Conflict and Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma):
What is Happening, Why and What To Do
– has been released, as of August 1, 2012, to bring focused attention to the history behind the conflict, and the roles that the British, various leaders of Burma, (U Nu, General Ne Win and others) the U.N. and the OIC (Organization of Islamic Cooperation) have played, and also bring attention to past and present parallel situations in southern Thailand, Bangladesh, Assam State of India, and China. The report makes clear the historic origin and development of the issues, how and why violence erupted in June and October of 2012 – as it has numerous times in the past – and the dynamics of the two faiths of Islam and Buddhism that are locked in struggle.
Much of the international media, NGOs, human rights groups, outside observers, and even the United Nations saw the June and October 2012 violence and ensuing refugee needs identified rather simply as the ‘Rohingya Refugees Fleeing by Boat Issue’ and that led toasimple ‘Rohingya Should Be Granted Citizenship’ appeal. And with that it is assumed, seemingly without question, that:
1) the Rohingya are actually indigenous to Arakan (as the Rakhine Buddhist are)
2) that the Rohingya actually are the victims of reasonless prejudice
3) that granting them citizenship should be unquestioned, and would alleviate the conflict and violence.
However, we clearly show, in the following report, that this massive conflict in Arakan has been mis-identified, and assumptions have been made which are – in objective reality – quite erroneous. And we show that there isamassive amount of manipulative and fraudulent media which has vilified and demonized the real victims of this conflict – the indigenous Rakhine Buddhist people.
There is alsoamassive amount of information both from historic realities, and from victims with human stories, as well as comparisons with other related conflicts, that will show the reality that the Buddhist Rakhine people are underareal and brutal campaign by Bengali Muslims, who have poured acrossaporous border and aspire o seize their centuries old cultural homeland and turn it into an Islamic State, without other people or religions tolerated.
Crucial to understanding the situation is knowing the history of the last 150 years in and around Arakan, and especially the history since WWII times. This report aims to show the real human suffering and tragic losses of the indigenous Rakhine Buddhist people. We have, in this report, many interviews with Rakhine elders, laborers, farmers, monks, teachers, authorities, mothers, widows, etc. All paintaterrifying picture of fears, violence, intolerance, fanaticism, and hopelessness.
We hope and request that the press, world leaderships, regional governments, human rights and aid organizations, and all those who are active or involved with the Arakan situation to please read, examine, and allow that the reality may be quite different than that which has been portrayed.
This Report has been made under the leadership and guidance of Aung Marm Oo, the Executive Director of AHRDO and Rick Heizman, the main writer of the report.
Aung Marm Oo- INFO@arakanhrdo.org Or AMO@arakanhrdo.org
Mobile: + 95 (0) 941000497
+ 95 (0) 973151193